(Daawo) Beesha Habargidir oo gebi ahaanba isku dhiibtay Fahad Yasin - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka (Daawo) Beesha Habargidir oo gebi ahaanba isku dhiibtay Fahad Yasin
(Daawo) Beesha Habargidir oo gebi ahaanba isku dhiibtay Fahad Yasin
Sida aan idinkugu soo gudbinay Oktober 13, waxaa Gudoomiyaha Golaha Siyaasada Beelaha Habar gidir Prof shirwac uu Fahad Yasin u soo dhiibay qalabka diiwaan gelinta muwaadinka taasoo lagu sheegay in lagu diiwaan gelinaayo muwaadinka Soomaaliga ah si uu xaq ugu yeesho in uu codkiisa wax ku doorto sanadka 2025, balse masuuliyadda diiwan gelinta ayaa waxaa leh Wasaaradda Arrimaha Gudaha & Federaalka, mana jirto meel aay ka soo galaan in shacabka aay diiwaan geliyaan dhaqanka.
Qatarta ku jirta barnaaminkan ayaa ah in beel walba aay diiwaan gashato dad aan u dhalan si aay u hesho tiro badan & kooxda Shabab aay hesho diiwaanka muwaadiniinta taasoo aay u isticmaali doonaan canshuur aruurin & diiwan gelinta dhalinyarada aay rabaan in ku daraan dagaal yahanadooda.
Barnaamijkan ayaa waxaa agaasime uu uga dhigay Fahad Yasin Mukhtaar Qooraanse oo ah shaqsigii ka danbeeyay in kooxda Al Shabab aay hesho liiska magacayda & sawirada saraakiisha sirdoonka ee NISA taasoo sababtay in saraakiil badan aay ugaarsadaan kooxda Shabab halka kuwo kalana aay dalka ka carareen.
Adeegsiga Diiwaangelinta Fahad Yasin ee loo soo dhiibay Prof Shirwac ayaa ah laba ujeedo .
In beelaha kale ee Soomaaliyeed iyana ay bilaaban Diiwaangalin isla markaasna ay caawinaad waydiistan si ay u fuliyaan cid kasto ka caawin kartaa maadama Fulinta mashruuca diiwangalinta uu ku baxaayo dhaqaalo fara badan & shaqaalo u tababaran . mana jirto beel mashruucaas kaligeed fulin kartaa.
In Diiwaangalinta ay horboodayaan qabaailo ay fursad u tahay in lagu dhax daro shucuub kale sida Oromo oo hadii dood ka dhalatana eededa ay qaadayaan qabiilka soo diiwangashtay. waxaa suuragal ah (User) lasiiyo beelaha in la isticmaalo laguna diiwan gashto ajaaniibta, iyadoo intaas laraadinayo kushubasho xiliga doorashada iyo in la helo codad faro badan.
Ma ahan markii ugu horeysay oo beelaha Habargidir ay isku dhiibeen ineey jaranjaro u noqdaan MW Farmaajo iyadoo laxasuusto Tabliiqeentii Wasiir Axmed Moallin Fiqi uu geed dheer iyo mid gaabanba u fuulay sidii uu Madaxweyne ugu dhigi lahaa Farmaajo.
Waxaa muuqata in Marlabaad Beelaha habar Gidir ay jaranjaro u noqdaan MW Farmaajo siduu ku heli lahaa Mudo kordhin.
Prof Shirwac mar uu ka hadlaayay diiwangalinta wuxuu yiri 2025 doorashada dhaceeyso ayaan u diyaar garoobeyna , hadaba suaasha iswaydiinta mudan ayaa ah Qabiil wax uuso diiwan galiyay malagu kalsoonan karaa doorashana malagu gali karaa Dowlad dhaxana maku shaqeyn kartaa ?
Isku soo wada duub qorshahaa diiwangalinta NISA oo fulinteeda lagu bilaaway Beelaha Habar gidir lama ogo ineey ku kadsoomi doonaan beelaha kale ee Hawiye loo isticmaalo hanaan diiwaangalin qiyaano ah.
Hadafka wa inuu ahaada waxkasto waxaa ka horeeyo doorasho 2020 ineey dalka kadhacdo & isbadal kadib kadib wax walbo doorashada kadib ayeey xalaal noqon kartaa .
Previous articleLataliyaha Kheyre, Kagwanja oo Mariixaan ku tilmamay inay khatar ku yihiin xasiiloonida gobolka
Next articleMW Farmaajo walaalkiis oo ka mid ah ganacsatada loo ogolaaday Jaadka Itoobiya
DFS oo ladamacsan in ay xildhibaano ka dhigto danbiilayaal si xasaanad loogu sameeyo
Gudoomiyihii Dagmada Balad Xaawo oo xilka laga qaaday
(Sawiro) MW Farmaajo meesha uu degi doono marka uu xilka ka dhamaado oo la ogaaday
Sharmarke Xuseen - October 23, 2020
Xogo si qarsoodi ah u heshay Muqdisho Online ayaa sheegaya in uu jiro qorshe ay wado Dowlada MW Farmaajo taaso lagu damacsan yahay in...
Maamulka Gobolka Gedo ayaa Cabdirashiid Cabdi Caroog u magacaabay in uu noqday gudoomiyaha cusub ee degmada Beled-Xaawo, waxaana xilkaasi laga qaaday Ahmed Barre Sheekh. Wareegto...
(Sawiro) MW Farmaajo meesha uu degi doono marka uu xilka ka dhamaado oo la...
Faysal Ali Axmed (Alteeso) - October 23, 2020
Marwada MW Farmaajo Saynab Macallin oo haatan ku sugan magaalada Kampala ayaa waxaa aay bilowday in aay magaalada Kampala ka raadiso guri kiro ah...
Corruption and Clannism: The Somali National Security Advisor and the Pursuit...
DFS oo ladamacsan in ay xildhibaano ka dhigto danbiilayaal si xasaanad...